Kolontsaina malagasy - Wikipedia
Ny kolontsaina malagasy dia kolontsain'ny vahoaka malagasy izay isan-karazany sady ahitana taratra ny andiam-pifindrà-monina nifanesy avy any ivelany nankaty Madagasikara, indrindra ny avy any Azia Atsimo-Atsinanana sy Afrika Atsinanana. Izany kolontsaina izany koa dia ahitana singa avy any Azia Andrefana sy avy any Eorôpa.
1 Fomba malagasy
1.2 Fomba amam-panao
2 Fiteny eto Madagasikara
2.1 Ny fiteny malagasy
2.2 Fiteny eorôpeana
2.2.2 Ny fiteny anglisy
2.3 Fiteny hafa
2.3.1 Ny fiteny arabo
3 Finoana sy fivavahana
3.1 Ny fivavahan-drazana malagasy
3.2 Ny kristianisma
3.3 Ny silamo
3.4 Ny fivavahana hafa
4.1 Zavakanto amin' ny teny
4.2 Sary sy hosodoko ary sary sikotra
4.3 Seho an-tsehatra
4.4 Hira sy mozika
4.4.1 Gadonkira malagasy
4.4.2 Zavamaneno malagasy
7 Tantara an-tsary
8.3 Fitafy sy fihaingoana
8.4.2 Kilalaon'ny ankizy
8.6 Jereo koa
8.7 Rohy ivelany
Ny fihavanana dia endriky ny fifandraisana eo amin'ny fiarahamonina malagasy izay mivoy ny fifanampiana sy ny fifandeferana ary ny firaisan-kina anjakan'ny filaminana. Amin'ny heviny mifintina dia manondro ny fifandraisan'ny olona iray fianakaviana ny fihavanana.
Ny fatidra dia fifanekena ataon'ny olona roa tsy misy rohim-pihavanana, nefa te hanova ny fifandraisany maha mpinamana tsotra na maha mifankahalala tsotra azy ho fifandraisana hamafisina amin'ny alalan'ny fandatsahana sy fisotroany ny ran'izy roa tonta, ka lasa fifandraisan'ny iray tampo izany fifandraisan'ny mpifatidra izany.
Ny ziva dia fihavanana nataon'ny razambe taloha. Saika mazana dia mpiziva avokoa no niavian'ny fihavanan'ny Malagasy manontolo. Ny ompa ifanaovan'ny mpiziva dia sangy anehoan'ny ny fifankatiavany. Ny foko mpiziva dia tsy maintsy mifanampy.
Ny sambatra dia famoran-jaza faobe atao any amin'ny faritra sasan-tsasany ao Madagasikara, indrindra any amin'ny foko antambahoaka, mba ahafahan'ny zazalahy hiditra ho isan'ny lehilahy eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Isaky ny fito taona mandritra ny efatra herinandro no anatanterahana izany.
Ny joro dia sorona sy vavaka atao hangataham-pitahiana amin'ny zanahary sy amin'ny razana mba hahazoana orana sy hahatonga ny fambolena ary fiompiana hahavokatra be, ny tsy hampisy mpisompatra sy mangalatra ny biby fiompy, indrindra ny omby. Angatahina mandritra ny joro koa ny fahasalamana sy ny fitomboan'ny zaza ary ny fahela-velon'ny olon-dehobe. Misy ny fafaovana sorona omby atao fanatitra. Fotoam-pifaliana mety maharitra hatramin'ny telo andro izany ho an'ny mpiara-monina.
Isan'ny fomban-drazana iray mampiavaka ny Malagasy ny famadihana. Ny famadihana dia fety atokan'ny Malagasy hahatsiarovana ireo efa maty, anehoana ny fifandraisana mbola misy eo amin'ny velona sy ny maty, izany hoe anehoana ny fanajàna sy fanomezana hasina ny razana. Atao amin'izany ihany koa ny fangataham-pitahiana amin'ny razana. Fotoana ahazoan'ny fianakaviana mifankahita koa izy io.
Ny dina dia fanambaràna ampahibemaso ombam-pianianana fa tsy hivadika amin'ny teny nomena. Dina koa no iantsoana ny fitsipi-pifehezana ny fiarahamonina neken'ny besinimaro.
Ny velirano dia fianinana atao ampahibemaso mba tsy hampisy ny hitsoaka amin'ny zavatra nifanarahana, amin'ny baiko nekena fa hotanterahina. Tamin'ny vanimpotoana faha mpanjaka dia maha tapa-doha ny fivadiham-belirano.
Fiteny eto MadagasikaraHanova
Maro ny fiteny tenenin'ny mponin'i Madagasikara, izay tsy Malagasy daholo fa misy vahiny koa. Ny fiteny malagasy no be mpahalala indrindra, manaraka izany ny fiteny frantsay sy ny fiteny anglisy. Misy mpiteny kômôriana, mpiteny gojaraty, mpiteny hindoa, mpiteny arabo ary mpiteny sinoa koa eto Madagasikara.
Ny fiteny malagasyHanova
Ny fiteny malagasy dia ao amin'ny sampam-piteny aostrônezianina. Araka ny antontanisan'ny Akademia malagasy dia ny 83,61 % dia tsy miteny afa-tsy ny teny malagasy. Miseho amin'ny endrika fitenim-paritra maro ny fiteny malagasy, dia ny fiteny bara, ny fiteny betsimisaraka atsimo, ny fiteny betsimisaraka avaratra, ny fiteny masikoro, ny fiteny merina, ny fiteny sakalava, ny fiteny tandroy-mahafaly, ny fiteny tanosy, ny fiteny antankarana, ny fiteny tsimihety, sns.
Ny fiteny frantsay dia fiteny ofisialy faharoa izay tenenin'ny 20 %n'ny Malagasy (miisa 4 983 000). Araka ny antontanisan'ny Akademia malagasy dia ny 0,57 %n'ny Malagasy no miteny frantsay fotsiny, ny 15,87 % miteny frantsay tsindraindray, ary ny 83,61 % dia tsy miteny afa-tsy ny teny malagasy. Mpikambana ao amin'ny vondron-tany miteny frantsay (Organisation Internationale de la Francophonie) i Madagasikara. Tsy mitovy amin'ny zava-misy ao Afrika atsimon'i Sahara ny eto Madagasikara, satria ny fiteny frantsay eto Madagasikara dia tsy nanjary teny ifaneraseran'ny samy Malagasy fa nijanona ho fitaovana enti-mifandray sy mifanakalo amin'ny any ivelany ampiasain'ny vitsy anisa. Tsy mila miteny frantsay ny samy Malagasy raha hifampiresaka na dia lazaina fa mbola misy ny tsy mifankahazo amin'ny fampiasana ny fitenim-paritra, ka isan'ny antony tsy mampisy ezaka hifehezana ny teny frantsay izany.
Ny fiteny anglisy dia fiteny ofisialy tamin'ny taona 2007 sy 2010. Vitsy dia vitsy ny toeram-pampianarana teny anglisy ary ny ankamaroan'ny sekoly (indrindra ny sekolim-panjakana) dia tsy manana mpampianatra teny anglisy. Vitsy ny Malagasy mianatra teny anglisy, izay manao izany hifandraisany amin'ny vahiny any ivelany na ny mpizaha tany, na koa mba hahazoany mamaky tahirin-kevitra voasoratra amin'io fiteny io. Olona latsaky ny 5 000 no miteny anglisy eto Madagasikara.
Fitenim-pivavahana ny fiteny arabo eto Madagasikara ka ny mpino silamo no mampiasa izany fiteny izany. Ny fikarohana nataon'ny Pew Research Center tamin'ny taona 2010 dia manambara fa ny 1,1 %n'ny mponina eto Madagasikara dia Silamo. Ny The World Factbook - Madagascar kosa dia nanambara fa 7 % izany. Tsy ny mpino silamo rehetra anefa no mahafehy ny fiteny arabo.
Mpivavaka ny ankamaroan' ny Malagasy ka ny maro amin' ireo dia manaraka ny fivavahan-drazana sy ny mampifangaro izany amin' ny fivavahana hafa, ao koa ny kristianisma sy ny silamo sy ny fivavahana hafa.
Ny fivavahan-drazana malagasyHanova
Ny fivavahan-drazana malagasy dia ny fivavahana sy ny finoana narahin' ny Ntaolo malagasy, izay mifototra indrindra amin' ny fivavahana amin' i Zanahary sy ny fanahin' ireo razana efa maty. Mihoatra ny 52 %n' ny mponina no manaraka ny fivavahan-drazana. Tsy misaraka amin' ny tontolon' ny velona ny tontolon' ny razana ka izany no ahitana Malagasy manao fomba isan-karazany amin' ny fanamboaram-pasana sy amin' ny fanatanterahana ny famadihana.
Ny misahana ny fandraharahana ny fifandraisana amin' ireo fanahy tsy hita maso ireo dia ny mpisorona, ny mpitan-kazomanga ary ny ombiasa. Inoan' ny Ntaolo malagasy ho manana hery miafina manimba ny mpamosavy. Manatona mpanandro koa ny Malagasy, izay mino ny fisian' ny atao hoe vintana, raha hanao zavatra mba hahaizany ny fotoana mety anatanterahany ny zavatra kasainy hatao sy ny fombafomba tokony hatao, ka mety misy ny ala faditra. Manatona mpisikidy koa ny Ntaolo malagasy raha te hahafantatra ny marina ny amin' ny zava-mitranga eo amin' ny fiainany.
Ny 41 %n' ny Malagasy dia Kristiana, araka ny tatitry ny US Departement of State tamin' ny taona 2011. Hita avokoa ireo sampan' ny fivavahana kristiana toy ny Fiangonana nohavaozina sy ny Fiangonana loterana sy ny Fiangonana katôlika sy ny Fiangonana adventista sy ireo Fiangonana evanjelika tsy mitsaha-mihamaro. Miezaka ny hampitombo isa ny fiangonany ny Ôrtôdôksa sy ny Anglikana sy ny hafa koa. Tamin' ny taona 1963 hatramin' ny 2004 dia niisa 72 ny "fikambanana ara-pinoana" voasoratra ao amin' ny lisitra ôfisialy tanan' ny fanjakana malagasy. Manodidina ny 200 any ho any ny isan' ny karazam-piangonana eto Madagasikara ka ny ankamaroan' ireo dia fiangonana vao niorina taty afara, dia ireo fiangonana evanjelika na ara-pilazantsara sy pentekôtista.
Ny silamo eto Madagasikara dia niorina tamin' ny taonjato faha-7. Nandray anjara betsaka tamin' ny fiforonan' ny kolontsain' ny Malagasy izany. Ny fikarohana nataon' ny Pew Research Center tamin' ny taona 2010 dia manambara fa ny 1,1 %n' ny mponina eto Madagasikara dia Miozolmana. 7 % kosa izany araka ny The World Factbook - Madagascar. Ny ankamaroan' ny Miozolmana eto Madagasikara dia manaraka ny finoana silamo sonita.
Ny fivavahana hafaHanova
Ny bahaisma dia niorina teto Madagasikara tamin' ny tenatenan' ny taonjato faha-20 ka fahatanterahan' ny fikasan' i `Abdu'l-Bahá, mpitarika ny Bahay maneran-tany, izany, izay naniraka ireo mpanaraka ny finoana bahay handeha aty Madagasikara. Tonga teto Madagasikara tamin' ny taona 1953 ny mpisava lalana voalohany ka nisy ny Malagasy niova ho amin' izany finoana izany. Tamin' ny taona 1973 no nanaovana filazana ôfisialy ny fisian' ny fikambanana bahay eto Madagasikara. Milaza ny Association of Religion Data Archives tamin' ny taona 2005 fa 17 900 no isan' ny mpino bahay eto Madagasikara.
Zavakanto amin' ny tenyHanova
Ny hainteny na hain-teny dia sokajin-dahabolana malagasy izay hita indrindra ao amin'ny Merina, izay miendrika tononkalo fohy iresahana zava-madinika aloha, avy eo mankany amin'ny tena lohahevitra, ka amin'ny alalan'ny fampifandraisana amin'ny fomba kanto ny voanteny araka ny endriny na ny heviny no ahatongavana amin'izany. Ny lohahevitra dia matetika momba ny fitiavana.
Ny angano dia fitantarana zavatra tsy nisy nefa namboarina ho toy ny nisy ary natao hanatsoahana fananarana, na fitantarana zava-nitranga tokoa. Karazana lahabolana tsotra, lava ary miendrika tantara foronina noho ireo dingana hita ao anatiny sy ny mpandray anjara ary ny olana sy ny vahaolana hita taratra ao amin'ny tantara ny angano. Ny Ntaolo dia nanabe ireo taranany tamin'ny alalan'ny fitantarana angano amin'ny hariva. Isaky ny maheno angano ny ankizy dia manatsoaka lesona, mahalala zava-baovao momba ny fiainana.
Ny ohabolana dia fehezanteny mirakitra fahendrena fampiasa matetika. Fitambaran'ny teny hoe ohatra sy volana ny teny hoe ohabolana, ka midika fa teny no nahazoana io teny io. Azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ny ohabolana, fa tena fanaingoana kabary indrindra koa. Teo amin'ny Ntaolo malagasy dia haoren-tsaina miampita amin'ny alàlan'ny lovantsofina toy ny angano ny ohabolana. Eto amin'ity rakipahalalàna ity, dia napetraka ao anaty fizarana iray amin'ny pejy iray ny ohabolana fantatra mahakasika iny pejy iny.
Ny kabary dia lahateny atao amin'ny feo avo ka entina hampitana hafatra ary matetika ravahina amin'ny hainteny sy ohabolana sady atrehin'olona maro. Samy nanana ny fomba nitrandrahany ny kabary ny rehetra ka izay no mahatonga ny famaritana somary maro amin'izao fotoana izao ny atao hoe kabary, fa saingy io no fototra ka miainga avy amin'io avokoa ny famaritana rehetra misy ankehitriny.
Ny sokela dia hainteny avy ao amin'ny foko Betsileo ao Madagasikara.
Ny tononkalo dia lahabolana na lahatsoratra natao andalana mifanarakaraka (na mifanaingintaingina) misy ngadona sy firindrana ary fitsipika mifehy ny fiafaran'ny andalana tsirairay mbamin'ny fomba hahakanto azy sady miompana amin'ny lohahevitra iray no natao hiantefa amin'ny saina sy ny fihetseham-po.
Sary sy hosodoko ary sary sikotraHanova
Ny tantara an-tsehatra na teatira na tantara tsangana dia tantara noforonina holalaovina an-tsehatra sy hojeren'ny olona. Niroborobo teto Madagasikara izy io teo aloha nefa very ny lazany ankehitriny.
Hira sy mozikaHanova
Ny salegy dia mozika sy dihy avy ao Madagasikara izay nipoitra avy amin'ny faritra avaratra sy avaratra andrefan'i Madagsikara.
Ny baoejy na bahoejy dia karazana mozika avy ao Madagasikara. Any avaratr'i Madagasikara, indrindra ny faritra Sofia no tena mampalaza ny baoejy ary efa miparitaka eran'ny nosy. Ny zavamaneno miaraka aminy dia ny angorodao sy ny kabosy ary ny hazolahy. Efa misy koa ny mpanakanto no mitendry baoejy amin'ny gitara.
Ny kilalaky dia mozika avy any amin'ny faritra atsimo andrefan' i Madagasikara.
Ny tsapiky dia mozika malagasy avy any amin'ny faritra atsimo andrefan'i Madagasikara.
Ny zafindraony dia karazan-kira malaza any amin'ny faritry ny Betsileo zay voktry ny fiezahan'ny Malagasy hampifangaro ny fomba fihira vazaha sy ny an'ny malagasy, tamin'ny nidiran'ny fivahana kristiana teto Madagasikara, ka ahenoana olona maro mihira sy mizara feo (feo voalohany, faharoa, fahatelo ary fahefatra). Matetika ny hira fifohazana (ao amin'ireo fiangonana prôtestanta) izy tsy noforonin'ny Vazaha dia hira zafindraony.
Ny hiragasy na hira gasy dia fampisehoana atrehin'ny vahoaka izay mitovitovy amin'ny tantara tsangana (na teatra) atao an-kira. Ny hiragasy dia fitambaran'ny feon-javamaneno (trômpetra, trômbônina, lokanga, sns) sy hira ary dihy mampiavaka ny kolontsain'ny faritra afovoan-tany eto Madagasikara, indrindra ny Merina. Atao ankalamanjana na anaty efitrano ny fampisehoana. Matetika dia mitafy malabary miloko mena marevaka sy mipataloha ny lehilahy mpanao hiragasy, fa ny vehivavy kosa mitafy lamba sy akanjom-behivavy miloko mavokely na maitso.
Ny basesa dia karazan-dihy salegy
Ny ambio zavamaneno malagasy vita amin'ny hazo mafy roa izay mikarantsana rahefa ampifampikapohina.
Ny kabosy dia zavamaneno malagasy. Mitovy endrika amin'ny gitara ny kabosy saingy kely.
Katsà na Faray ;
Ny lokanga dia zavamaneno fahita ao Madagasikara. Ny foko Bara no niavian' ny lokanga. Mitovitovy amin' ny lokangam-bazaha ny lokanga saingy telo ny isan' ny tadiny.
Ny marovany dia zavamaneno malagasy mitovy amin' ny valiha nefa lehibe sady misy tadiny maro noho ny valiha.
Ny sodina dia zavamaneno tsofina amin' ny vava, toy ny fantsona mahitsy, misy lavaka milahatra manaraka ny halavany izay tampenana manontolo amin' ny rantsan-tanana afa-tsy ny iray izay avela hivoha mba hivoahan' ny haavompeo tiana ho heno. Amin' ny teny indôneziana dia atao hoe suling ny sodina.
Ny taralila dia karazana angorodao fahita any amin' ny faritry ny Betsimisaraka, ao Madagasikara.
Ny valiha dia zava-maneno malagasy vita amin' ny volontsangana, miendrika varingarina sady misy tadiny maro manaraka ny andavany.
Jereo ny pejin'ny sakafo malagasy raha te hahafantatra bebe kokoa ianao.
Fitafy sy fihaingoanaHanova
Fitafy nentindrazana fahita amin'ny faritra maro ao Madagasikara ny lamba. Misy karazany maro araky ny akora nanamboarana azy sy ny didiny.
Ny fanorona dia lalaon-tsaina nenti-paharazana malagasy. Olon-droa no mifanandrina amin'izany ary mandany ny vaton'ilay mpifanandrina ny tanjona. Rehefa maty kosa ilay mpifanandrina iray, dia azo avela koa dia miroso amin'ny fomba filalaovana antsoina hoe "vela" ny mpifanandrina roa, mba ahafahan'ilay maty tamin'ny voalohany ho afa-bela.
Ny tsobato dia kilalao nentim-paharazana malagasy. Vatokely dimy no ilaina ary misy dingana maromaro arahina ka ampifamenoina ny isa azo ka arakaraka ny isa tratrarina nifanarahana no atao isa farany. Izay mahafeno io isa nifanarahana io voalohany no mpandresy.
Ny diamanga dia haiady malagasy mifantoka amin'ny daka.
Ny moraingy na morengy dia karazana haiady nentim-paharazana malagasy ampiasana ny hondry sy ny tongotra, tsy ampiasana fitaovam-piadiana hafa. Haiady fanao eran' i Madagasikara ny moraingy, indrindra any amin' ny faritra amorontsiraka, any amin' ny faritra avaratra sy atsinanana.
Ny savika dia tolon'omby ao amin'ny foko Betsileo.
Pejy natokana ho an'ny Mozika Malagasy
Fikarohana momba ny fitafy malagasy nataon'ny mpianatry ny Alliance Française
Fitafy malagasy ao amin'ny Tranonkalan'ny Ministeran'ny Kolontsaina Archived Jiona 29, 2017 at the Wayback Machine
Kilalao malagasy ao amin'ny Kilonga.com Archived Jolay 22, 2016 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kolontsaina_malagasy&oldid=1038063"
Dernière modification le 26 Septambra 2021, à 06:56
Voaova farany tamin'ny 26 Septambra 2021 amin'ny 06:56 ity pejy ity.